अफगानिस्तानमा भो’कमरी ! आफ्नै बालबालिका’को अ ङ्ग नै बे’चेर गु’जारा चलाउँदै – Nep Stok
माघ ३, २०७८ सोमबार 143
अफगानिस्तान’मा भो’क’मरी’का का’रण वि’स्थापित हुने’को स’ङ्ख्या ब’ढ्न थालेको छ । केहीको अवस्था चि’न्ता जन’क रहेको छ । यस्तै केहीले आफ्नो र आफ्ना बालबालिका’को अ’ ङ्ग नै बे’चे’र गु’जा रा च’ला’उन था’ले’का पाइए’को त्यहाँ’को टोलो न्युजले जनाएको छ ।
अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त’मा भो’क’म’री’का का’रण समस्या बढ्दै गएको हो । त्यहाँको एक क’ल्याणकारी समितिले वि’स्था’पित भएका र भो’क म’री’को च’पे’टा’मा परेकाहरु’लाई सहयोग गर्दै आएको छ । गु’जा’रा चलाउन’कै लागि अ’ ङ्ग बे’च्नु पर्ने बा’ध्य ता न’आओस् भन्ने उद्देश्यले समितिले सहयोग गरेको जनाएको छ ।
यु’द्ध’को च’पे’टा’मा प’रे’काहरु सबैभन्दा धेरै मा’र’मा परेका छन् । अफगानिस्तानमा मानवीय स’ङ्क’ट निम्तिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय दा’तृ नि’काय’लाई सहयोगको ढोका खुला राख्न आ’ह्वान गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्, अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली काबुल प्रस्थान गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजबाट औषधि, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्रीसहित काबुल प्रस्थान गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा हिमालयन एयरलाइन्सको विमानमार्फत झन्डै १२ टन मानवीय सहायता सामग्रीसहित एक टोली आज त्यसतर्फ गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्रको नाताले अफ्ठ्यारोमा सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेजारी ठानेर अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग सामग्री पठाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । आज सहयोग सामग्री हवाईजहाज अफगानिस्तानको राजधानी काबुल जाने र विमानस्थलमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयका प्रतिनिधिमार्फत सामग्री हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
Nextकोभिडबाट श्वास फेर्न गाह्रो भयो ? तुरून्त अपनाउनुस् यी १६ उपाय
दैव पनि कति निस्टुरी ! संसारनै राम्रोसँग देख्न नपाई ९ महिने शिशु’को दुर्घटना’मा मृ’त्यु
हिरासतमा रहेका पललाइ रुपनीको भावुक चिठी